विचार /विश्लेषण Archives - Sidhadrishti
Category Archives: विचार /विश्लेषण
नेपाली युवाको अवस्था दुःखद्
हरेक देशमा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने देखि लिएर हरेक कार्य सञ्चालन गर्न युवाको आवश्यक पर्दछ । युवा एक यस्तो परिचालन हो जसले सम्पूर्ण राज्यको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । युवा बिना राष्ट्र सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । युवा भनेको देशको शक्ति हो तर हाम्रो देश नेपालमा भने आजकाल युवाको अतिचरम अभाव हुन थालेको छ । जसको मुख्य […]
Posted by १८ श्रावण २०७५, शुक्रबार Posted inविचार /विश्लेषणLeaveacomment on नेपाली युवाको अवस्था दुःखद्
प्रधानमन्त्री ज्यु ! सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने, अनि सपना चाहिँ रेल ?
अहिले हाम्रा भइरहेका सडकहरु नै खाल्डाखुल्डीले निकै नराम्रा बनेका छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सडक हो । भएकै सडकका खाल्डा पुर्न नसक्दासम्म रेलको सपना बाँड्नु न्यायोचिन होइन । अहिले रेल हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । बरु देशभर सडक सन्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । अझै पनि हाम्रा गाउँहरु सडक सन्जालको पहुँचबाहिर छन् । गाउँबाट सहरसम्म आउन पैदल […]
Posted by १६ असार २०७५, शनिबार Posted inफिचर न्युज, विचार /विश्लेषण, समाचारLeaveacomment on प्रधानमन्त्री ज्यु ! सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने, अनि सपना चाहिँ रेल ?
अमेरिकामा के हो त हिट एन्ड रन भनेको ? हिट एन्ड रन भ​एमा सजायको भागिदार बन्नु पर्दछ त​ ?
सानुबावु सिलवाल । अमेरिकामा के हो त हिट एन्ड रन भनेको ? हिट एन्ड रन भ​एमा कानुनि के कस्ता सजायको भागिदार बन्नु पर्दछ त​ ? तपाइ अमेरिकामा गाडि चलाउदै हुनुहुन्छ​, तपाइसङ्ग ड्राइभर लाइसेन्स छ, तपाइ अमेरिकन कुनै पनि राज्य, शहर वा कुनै पनि सडकमा गाडी हाकिरहनु भ​एको छ र लाइसेन्स लिने र गाडि किन्ने सुरसारमा […]
Posted by ८ असार २०७५, शुक्रबार Posted inविचार /विश्लेषण, समाचारLeaveacomment on अमेरिकामा के हो त हिट एन्ड रन भनेको ? हिट एन्ड रन भ​एमा सजायको भागिदार बन्नु पर्दछ त​ ?
९ हजार टिपिएस धारि नेपालिहरु डिपोर्टेसनमा अर्थात खेदिदै अमेरिकाबाट​ ।
सानुबाबु सिलवाल । अमेरिकामा रहेका कमाउवाला नेपालि वकिल, केहि नेपालि सघ सस्था र ब्याक्तिहरुको बेजोड दौडधुपले पनि केहि खासो सारेन र अन्तत अमेरिकि सरकार र उसको सम्बन्धित बिभाग होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सन २०१५ मा नेपालमा आएको महाप्रलय भुकम्पलाइ मध्यनजर गरि अमेरिकामा बसेका नेपालिहरु जो सङ्ग बर्षौसम्म कानुन त अमेरिकामा बस्ने कागज छैन उनका निमित्त उक्त भुकम्पबाट […]
Posted byWebPal Support १२ बैशाख २०७५, बुधबार April 25, 2018 Posted inआजको विशेष, विचार /विश्लेषण, समाचारLeaveacomment on ९ हजार टिपिएस धारि नेपालिहरु डिपोर्टेसनमा अर्थात खेदिदै अमेरिकाबाट​ ।
‘स्वर्गको एक टुक्रा हो’ रामारोशन
रामारोशनलाई स्वर्गकै एक टुक्राको रुपमा लिन सकिन्छ । यहाँ मनमोहक ताल र रहरलाग्दा फाँटहरु अवस्थित छन् । रोशन मैदानमा नाचिरहेका डाँफे, दौडिरहेका मृग र कस्तूरीले मन्त्रमुग्ध बनाउँछन् । यसैगरी, त्यस क्षेत्रमा फुलेका सेता र राता लालीगुराँस, आकाशै छोप्लाजस्ता अग्ला पहाडका चुचुरा र तालमा पौडिरहेका जलहाँसले सुनमा सुगन्ध थपिरहेका छन् । रामारोशनको अवस्थिति पश्चिममा भाटाकाटिया र […]
Posted byWebPal Support ११ बैशाख २०७५, मंगलवार Posted inदेश, विचार /विश्लेषणLeaveacomment on ‘स्वर्गको एक टुक्रा हो’ रामारोशन